YuIP.org - Jereo ny IP-bahoaka sy ny tsy miankina IP Online.
YuIP.org Ampiasao YuIP toerana mba hahitana ny IP, mba hijery misokatra seranana, koa hizaha toetra ny servers latency ny maro eto amin'izao tontolo izao, ary hanome baiko ny aterineto Ping.
Asehoy ny IP
Ny IP ao amin'ny Internet
Ny IP Local Network
eo ho eo latency
Ny IP ao amin'ny Internet, aho niresaka momba ny adiresy IP-bahoaka, izay midika fa ny adiresy IP izay tranonkala rehetra hijery anao dia afaka mahazo izany. Raha mampiasa ny taratasy fanomezam-pahefana mpizara IP-bahoaka mitovy ny mpanatrika ny mpizara taratasy fanomezam-pahefana IP.
Ny IP ny LAN, izany dia mitovy toy ny adiresy IP manokana. Zavatra tsy IP fanononana tsy ampy fitaovana ihany izay mifandray amin'ny tambajotra an-toerana. Hijery ny adiresy IP amin'ny fahafahana miditra amin'ny LAN ity takelaka ity dia mampiasa ny fahazoan-dalana hidirana navigateur Chrome na Firefox navigateur, satria tsy ny rehetra no afaka mahita azy io.
Nalefa any amin'ny iray mifanitsy IP adiresy IP izay manana tanjona mba hamantarana ny fitaovana mba miditra amin'ny aterineto toerana amin'ny alalan'ny HTTP proxy mpizara. Mety ho ny taratasy fanomezam-pahefana dia voaendrika mpizara tsy mba maneho ny IP Forwarded. Misy toe-javatra hafa izay Forwarded IP dia mampiasa amin'ny entana hahay handanjalanja.
Ny ISP, saha io miezaka hamantatra ilay orinasa tompon'andraikitra ny aterineto.
Latency eo ho eo, eo ho eo ny tiako holazaina ny fotoana ny aterineto mba mandefa sy mahazo baiko kely ny tranonkala. Izany dia nitranga isaky ny indray rehefa miditra amin'ny tranonkala. Ary ny fohy kokoa ny fotoana, ny haingana kokoa ny mandefa sy mahazo ny rafitra comandos.O dia hiezaka mba hahatonga ny fitsapana latency amin'ny aterineto mampiasa ny akaiky indrindra azonao atao AWS lohamilina.